ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားနားထောင်တာ ပျော်စေချင်လို့ပါ ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး - Cele Gabar
ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားနားထောင်တာ ပျော်စေချင်လို့ပါ ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး
နိုင်ငံကျော် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးချော ဖွေးဖွေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံထိပ်တန်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်တိုင် အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်ထားနိုင်ပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ပဲ အကယ်ဒမီဆုတွေ ရခဲ့သလို ပရိသတ်ကလည်း အထူးအားပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ စိတ်ထားဖြူစင်သလို ၊ ကူညီတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုလည်း အလေးထား ဆက်ဆံတတ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဖွေးဖွေးဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားနားထောင်တာ ပျော်စေချင်လို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို “Purple ဆိုးခိုင်းတဲ့သူ မဲများနေလို့ Purple အနု ဆိုးပြီးသားပေမယ့် ဆိုးလိုက်တယ်နော်! တခါတလေလေး..ယူတို့ စကားနားထောင်ကြည့်တာ ပျော်စေချင်လို့ နောက်တပတ်မှနောက်တမျိုးပြောင်းမယ် တီချို တီခိုင် “HELLO” ဆီမှာ ဆိုးလို့ရပါတယ် Paul Mitchell က ယာယီဆိုးဆေး Semi Permanent Colour ink နဲ့ဆိုးပါတယ်! ဖွေးလို ခဏ အပျော်ဆိုးချင်သူများနဲ့ အဆင်ပြေ လောက်တယ်နော်! ပုံ/ ပါပယ်ပဲပိစိန် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စကားနားထောင်ကာ ဆံပင်အရောင်လေးဆိုပြီး တခါတလေပရိသတ်တွေရဲ့ စကားနားထောင်တာ ပျော်စေချင်လို့ပါတဲ့နော်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဖွေးဖွေးကတော့ ပရိသတ်တွေကို အလေးထား ဆက်ဆံတာလေးကိုက ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာနော်။
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Phway Phway, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, ဖွေးဖွေး
Previous post အဆိုတော်မဖြစ်ခင်ကတည်းက အကိုတစ်ယောက်လိုခင်မင်ရတဲ့ သူအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုပို
Next post မွေးနေ့တူ Frenzo အဖွဲ့ဝင် (၂)ယောက်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖြိုးလေး